ကျား နဲ့ ဆင် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
တနင်္လာကျား ဘုရားသားး)
ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ကြတာပေါ့....
လမ်းကလေး ပြာပြာမှောင် မှာ..
ကြောင်ကလေး ပြောင်ပြောင်မာ နဲ့.. (အဲ..မှားသွားလို့..:P)
၁၄နှစ်ရှိပြီပေါ့ မချိုကျားလေး...ဆင်ပြောင်ကြီးသွားရာ ကျားမ ဆတ်တောက် ပေါ့လေ...ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ၁၄ နှစ်မှ နှစ်ပေါင်း များစွာ....ရွှေလက်တွဲပျော် နိူင်ကြပါစေသောဝ်....:))
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကျားနဲ့ဆင်တို့ပါလား။ ဆင်ပိန်ပိန်လေးက အမြဲတမ်းမငြီးမငြူ ထမ်းခေါ်နိုင်ပါစေ ကျား၀၀လေးရယ်။
မမ ရှေ့ဆက်ပီးလည်းသာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေးကို ပျော်ရွှင်စွာဆက်သွားနိုင်ပါစေ...
အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေး ဖြစ်ပါစေ မမ..
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေကြောင်း
ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလျက် ...........
အသည်းနှလုံးကို ဗဟိုပြုပြီး စဉ်းစားတယ်၊
အဲဒါ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးပါပဲ အမ၊
ဒီစာကို ဖတ်ရင်း ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော ကျားနဲ့ဆင်တို့ကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ မမရေ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲမှာ ကျားနဲ့ဆင်ကို မြင်ယောင်သွားတာ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ၁၄နှစ်တာခရီးမှသည် သက်ဆုံးတိုင်အောင် မခွဲမခွာ အတူတကွ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ မမကျားနဲ့အစ်ကိုဆင်တို့ရေ။း)
(ဇွန်ကတော့ စနေသမီး စိတ်ကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ အဟဲ..)
Happy Anniversary.............. :)))))
၁၄ နှစ်မှသည် မိသားစုကလေး ပျော်ရွှင်အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်း နိုင်ပါစေဗျာ ...
တစ်ဆယ့်လေးနှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဒေလီယာပန်း၊
ဆင်က.. ကျောက်ခဲ မဟုတ်တော့.. လည်ပြင် ( ပြင်ညောင်) မှာ တွေ့ခဲ့တာတော့..မဟုတ်တန်ရာ...း)
ပျော်ရွှင် တွဲလက် ဆက်ဆက်ခိုင်မြဲ ပါစေ.. မချိုသင်း
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာလေး .. အမရေ ပျော်ရွှင်စရာ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါစေ။
်အကျယ်ချုပ် ၁၄နှစ် ရှိပြီကိုး။ အတော်သည်း ခံနိုင်တဲ့ ဆင်ပဲ။:))
ပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ။ အသက်ထက်ဆုံး တယောက်ကိုတယောက် နားလည်မှု ရှိရှိနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။
ပျော်ရွှင်သော နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေ...။
very beautiful writings and story sister.
Please write more. I have been waiting for new posts everyday.
Happy Anniversary ပါ ကျားနဲ့ဆင်...
ပါးမှန်တယ်..(.အဟဲ..ဆင်ကြီးမရှိတာကလွဲလို့ :D )
အတူဝင်တယ်နော် :P) ဒေါသထွက်ခဲတယ်။အဲဒါအမှန်။
၁၄နှစ်လက်တွဲလာခဲ့ပြီးပြီနော်။ ပျော်စရာကြီး။မမတို့ ၂ယောက်ကသိပ်ချစ်တာကိုး။ မမကိုလွမ်းလို့ ဒီနေ့တုတ်ထိုးလုပ်စားတယ်သိလား။ :D
မမတို့ ၁၄နှစ်မြောက်မင်္ဂလာသက်တမ်းမှသည်..ရိုးမြေကျပျော်ရွှင်စွာ ၂ယောက်အတူလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေနော်
ကိုကိုကျော်ဝဏ္ဏ နဲ့ မမချိုသင်း
မျက်စိထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကောင်လေးတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မိတယ်။
ပြီးတော့ ဟိုးမင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ကာတွန်းပုံလေးကလည်း မျက်စိထဲ ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်...။
ဘ၀နှစ်ခုကို အတူတူ .. ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ၁၄ နှစ်ကျော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်လှတဲ့ ကိစ္စပါ ချိုသင်းရေ..
ချိုသင်းရော ကိုကျော်ဝဏပါ ကံကောင်းကြတယ်
ကျန်နေသေးတဲ့ဘ၀ ရှေ့ခရီးမှာလဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ လမ်းတွေပေါ်ပဲ လျှောက်လှမ်းရပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်
ဒါနဲ့.. ချိုသင်း အတွက် မမ ပို့စ်လေး တပုဒ် စ.. ထားတယ်.. ၆ ဂဏန်းကို ပိုင်စိုးသူများ အကြောင်း တဲ့.
ညီမ စီဘောက်မှာ လာပြောပြီးထဲက စ ထားတာပါ.. အလုပ်က လူကို အနိုင်ယူနေတာမို့ လက်စ မသပ်နိုင်သေးဘူး
ညီမရဲ့ မွေးနေ့ မတိုင်မီတော့ တင်ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့
ဗေဒင်အလိုအရဆို တနလာင်္နဲ့ ဗုဒ္ဒဟူးဆိုတာ
စီးပွားဖက်ဆိုလားပဲ ( သူများတို့ကျ ဥသာ :P )
"""ကိစ္စအကုန်လုံးကို နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရင်ထဲက အသည်းနှလုံးကို ဗဟိုပြုပြီးမှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြတာများတယ် ""
မမချိုသင်းတို့ ၂ ယောက် အိုအောင်မင်းအောင် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ကိုယ်၏ချမ်းသာစွာ
တနလာင်္ ကျား အီးအီးစား ဗုဒ္ဓဟူး ဆင် အီးတွေစင် ဟားဟား နောက်သွားပါသည်အမရေ
ကျနော့အမ ကျားလေး(ကျားလေးဆိုပဲ) ကိုအခုလို ဖေးဖေးမမ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာ (ဘယ်လောက်စိတ်ကောက်ကောက် :P) ဂရုတစိုက် နေပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း
မောင်ငယ် ကျားပိစိနှောက်တောက် ပေါက်စိကွေး သေးသေးလေး (သူမှ ကျားလေးဆိုတော့ လေ)
ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြတာတာ လက်စသပ်တော့ ဆင်က ကျားကို ထမ်းပြီး လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ပြန်သွားကြတာကိုး..ကျင်းပြန်ကြီးသဘောထားကို မေးကြည့်ဦးမယ်..လေ..
ဆရာစွမ်းကတော့ လွတ်ရက်မရှိ တသက်ဆိုတော့ တကျွန်းဆိုပဲ..အင်း....
အားကျ
စီနီယာ အကိုအမများမို့ လေးလေးစားစား ဂုဏ်ပြုသွားပါတယ်။
ဆင်လေးက နည်းနည်းပိန်တော့ ကျားလေးက တအားကြီး ခုန်ပေါက် မစီးနဲ့နော် :)
အခုလိုပဲ ဆက်လက်ပြီး ဘိုးဘိုးဆင် ဘွားဘွားကျားဖြစ်တဲ့အထိ ဘ၀တလျောက်လုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင် လက်တွဲ ပျာ်ရွင်ကြပါစေ။
ချစ်စရာ နှစ်ပတ်လည်ပိုစ့်လေး ဖတ်လို့ ကောင်းပါ့...
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲ ခိုင်မြဲစေကြောင်း ဆုတောင်းတယ်နော်...
Happy Anniversity ပါမချိုသင်း..
Happy Anniversary ပါ မမမိုးချိုသင်း !
မမရေးထားတာ ဖတ်ရတာ အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်.........
Happy Anniversary Ama.
မကျားမ ကိုထမ်းရတဲ့ ကိုဆင်ပိန်ခမြာ ခါးတောင်နာရှာသတဲ့...(မယုံရင်ပုံပြင်မှတ်..း))))))
Happy Anniversary!! You have very creative thinking.
၁၄ နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာသို့ ...
ကျားနဲ့ဆင် ရွှေလက်တွဲပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ :)
Happy anniversary to အကို ကျော် နှင့် အစ်မ ချိုသင်း
Wish you and your hubby belongs happy life until the end of your life.
အစ်မတို့ စုံတွဲက သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ။
အခုလို ပျော်ရွှင်စွာတသက်လုံး လက်တွဲနိုင်ပါစေ။
မချိုသင်းရေ ... တို့တွေလဲ ကျားနဲ့ဆင်ပဲ ...
ဆင်တွေက စိတ်တို၊ စိတ်ဆိုးလွယ်သတဲ့ ... ပြီးတော့ ပြီးတာပဲတဲ့ ... ကျားတွေကတော့ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဆိုးရင် ကြမ်းတယ်။
မချိုသင်းရေးတဲ့ ကျားနဲ့ဆင်ကချစ်ချာလေး ။
၁၄နှစ်မြောက်မှ သက်ဆုံးတိုင်ထာဝရ သို့ ...
ကျားကလေးနဲ့ ဆင်ကလေး ဥယျာဉ်ထဲမှာ
ပျော်ရွှင်စွာ ရာသက်ပန် .. ရိုးမြေကျ ... ..
အီကြာကွေး .. အီကြာကွေး
မုန့်ဖက်ထုပ် .. မုန့်ဖက်ထုပ် :P
ဆင်ပိန်ပိန်လေး ၊ ကျားဝဝလေး နှင့် တစ်သက်လုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
အသက်ထက်ဆုံး ချမ်းမြေ့သာယာ ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးဆက်နိုင်ကြပါစေ အစ်မ........။
အဲ့ခါကျတော့လည်း ပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့ ရေးပါအုံးနော်။ ဦးဆင် ဒေါ်ကျားနဲ့ မီးမီးကြောင်လေးတို့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဆင်နဲ့ ကျား ဘဝ
ဖတ်ရတာ အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲ မမ။
ချစ်တဲ့မမတို့ ရာသက်ပန်ပျော်ရွှင်စွာ ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရစေနော် ...
ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ.. အရမ်းအေးချမ်းတာပဲ
မမချိုသင်းတို့ အမြဲဒီလိုပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
အမချိုသင်း ချစ်သောသူနဲ့ အနှစ်တရာ ပျော်ရွှင်စွာနေရပြီး အသက် ရာကျော်ရှည်ပါစေ... ဖတ်ပြီး ကြည်နူးလိုက်တာ အမရေ
ကျားလေးနဲ့ ဆင်လေး ၁၄ နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။
တူ၊တူမလေးတွေ ထိန်းပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ပြောနော် မ
ိုကိုကျော်ဝဏ္ဏ နဲ့ ချိုသင်း
ကျား ကျီစားရာခံနိူင်တဲ့ ဆင် နဲ့
ဆင် ကျီစားရာခံနိူင်တဲ့ ကျား
ဆင်နဲ့ကျား ပိမိမှာ မကြောက်တဲ့
ကြောင်နဲ့လဲ အသက်ထက်ဆုံး နေနိူင်ပါစေ..
Happy anniversary Cho and Kyaw.
You are tiger and elephant and we are mouse, elephant and daughter dragon.
ချစ်စရာကောင်းပြီး အလွန်လိုက်ဖက် တဲ့ ကျားလေးနှင့်ဆင်ကြီး
သြော....လက်စသတ်တော့ ကျားနဲ့ဆင်က လယ်ပြင်မှာမတွေ့ပဲ RC(2)မှာတွေ့ခဲ့တာကိုး....
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်... အမချိုသင်း
ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာအိမ်ထောင်လေး နစ်တရာ အင်း ... နစ်၂ရာ မက တည်မြဲပါစေ
အမတို့ ကြောင်းဖတ်ရတာ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
Dear Cho Thin,
Whenever i am unhappy or down , i have read your articles and enjoy,.At lease makes me smile. I like your writing style and your interesting articles. Although simple, but attractive to readers. Thanksalot.
Happy Anniversary ပါ မရေ..
အမရဲ့ ပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူးလိုက်တာ.. Disney က ကာတွန်းကောင်လေးတွေအကြောင်းရေးထားသလိုပဲ.... :)
မမိုးချိုသင်း... မိသားစုဓါတ်ပုံတင်ပေးပါလား။ တစ်ချို့ကသိကြပုံပေါ်တယ်။ ကျွန်မကမသိနေတော့ဖတ်ရင်းတစ်ခုခုလိုနေသလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။
အမြဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပါစေ ...
မမ.... Blog ကိုအမြဲတမ်းရောက်ပေမယ့် Comment မပေးတက်လို့ တစ်ခါမှ မပေးဖြစ်ဘူး.... မမ..ရေးတာလေးတွေက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ... ဖတ်ပြီးရင် စိတ်ကိုချမ်းသာနေတာ... ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ....ဘ၀သက်ဆုံးတိုင် ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ......
ချိုသင်းရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေးမှ တသက်လုံးစာ ချစ်သောသူနှင့် အတူ...(တို့ အမှတ်မမှားရင်....ဒီနေ့ ချိုသင်းမွေးနေ့ မဟုတ်လားဟင်)....အလုပ်တွေ ကိစ္စများမြောင်နေတယ် ဆိုတော့....မွေးနေ့ပို့စ် မတင်ဘူးလား...လို့ လာချောင်းတယ်...:))
15th Mar နော်...:))
Happy Anniversary ....!
Sure, Elephants are so cool ...
One of Elephants,
Pls write abt yr opinion on election.if saya tin moe is alive, how he will decide?daw su told she would not even think of registering under these unjust laws.
၁၄နှစ်မှ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်အောင်အတူလက်တွဲပြီး အခက်အခဲတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်လွှား နိုင်ပါစေ။(သမီး၊မြေးတွေနဲ.ပေါ.)
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ထာဝရ ချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့ နေ့ရက်များစွာ ချိုသင်းနဲ့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ..:D
ဒီပို့စ်လေးကို မမြင်မိဘူး..သတိရလို့ လာလည်မှ တွေ့လို့... စာရေးကောင်းတဲ့ ချိုသင်းကြောင့် ကျားလေးရယ် အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဆင်ပြောင်ကြီးရယ်.. သမီးညောင်လေးရယ်ကို မြင်ယောင်ရင်း.... သဘောတွေကျသွားပါတယ်.. ဘယ်နှယ့်..အိပ်ရင်းဟောက်တာများ...သံစုံလို့ပါလား..:))
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော် ကောင်မလေးအတွက် အဲဒီလိုလေး ရေးချင်လို့အမ စာသားလေး ကူးသွားပါတယ်....အမ ခွင့်ပြုပါနော်....
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ ကို....
အမ စာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း
စာလေးတွေဖတ်ရတာ ချောနေတာပဲ။ ဖအေ့သမီး ပီသပါပေတယ်။ ဒီကလည်း ကျားဆိုတော့ တိုက်ဆိုင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ် ဒကာမရေ။